Fibromyalgia သည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါဖြစ်ပြီးပုံမှန်အားဖြင့်မတူညီသောရောဂါလက္ခဏာများနှင့်လက်တွေ့လက္ခဏာများအတွက်အခြေခံကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ ဤတွင်သင်သည်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါ fibromyalgia နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့သောဆောင်းပါးအမျိုးမျိုးအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဤရောဂါရှာဖွေရန်အတွက်မည်သည့်ကုသမှုနှင့်မိမိကိုယ်ကိုတိုင်းတာမှုများကိုရရှိနိုင်ပါသနည်း။
Fibromyalgia သည်ပျော့ပျောင်းသောတစ်ရှူးအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းအဖြစ်လူသိများသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များ၌နာတာရှည်နာကျင်ခြင်း၊
၇ Fibromyalgia နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အချက်များ
13 / 06 / 2017 /1 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia, နာတာရှည်နာကျင်မှု/av ရေတံခွန်
7 Fibromyalgia နှင့်အတူသည်းခံရန်သိကောင်းစရာများ
ချွတ်လိုက်ပါ fibromyalgia နှင့်မြို့ရိုးပေါ်မှာလမ်းလျှောက်ဖို့အကြောင်းကို? မင်းကိုကူညီရအောင်
Fibromyalgia သည်နေ့စဉ်ဘဝတွင်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ နာတာရှည် နာကျင်မှု လက္ခဏာစုတစ်ခု ရှိဖို့ ရိုးရှင်းစွာ ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။ ဤသည်မှာ fibromyalgia ၏ပုံမှန်လက္ခဏာများကိုသက်သာပျောက်ကင်းစေပြီးသင့်တစ်နေ့တာပိုမိုလွယ်ကူစေရန်ကူညီပေးနိုင်သည့်အကြံပြုချက်7ခုရှိသည်။
- နာတာရှည် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု လက္ခဏာများကို တိုးမြင့်စွာ နားလည်ရန် အတူတကွ
နာတာရှည် ဝေဒနာ ရှိသူ အများစုသည် နားမကြားခြင်း သို့မဟုတ် အလေးအနက် မထားဘဲ ခံစားရခြင်း ဖြစ်သည်။ ဒီလိုဖြစ်ခွင့်မရပါဘူး။ နာတာရှည် ဝေဒနာ ခံစားရသူများနှင့်အတူ ကျွန်ုပ်တို့ ရပ်တည်ပြီး ဤရောဂါနှင့် ပတ်သက်၍ နားလည်မှု တိုးမြင့်လာစေရန် ဤဆောင်းပါးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် မျှဝေပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ကြိုတင်ပြီးကျေးဇူးပါပဲ။ မှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုနောက်လိုက်ရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ Facebook က og YouTube ကို.
- Oslo ရှိ Vondtklinikkene ရှိ ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ကြားရေးဌာနများ (Lambertseter) နှင့် Viken (Eidsvoll အသံ og Råholt) ကျွန်ုပ်တို့၏ ဆေးခန်းများသည် နာတာရှည် နာကျင်မှုကို အကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လေ့ကျင့်ခြင်းတို့တွင် ထူးခြားစွာ မြင့်မားသော ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အရည်အချင်း ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူ၊ သင်အမြဲအလေးအနက်ထားလိမ့်မည်။ လင့်များကိုနှိပ်ပါ သို့မဟုတ် ဒီမှာ ကျွန်ုပ်တို့၏ဌာနများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်။
fibromyalgia နှင့် သင့်အတွက် အထောက်အကူဖြစ်နိုင်စေမည့် လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အပန်းဖြေနည်းများပါရှိသော ကောင်းမွန်သော လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုနှစ်ခုကို ကြည့်ရန် အောက်သို့ဆင်းလိုက်ပါ။
ထိခိုက်? ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အုပ်စုသို့«ဒူလာ - နော်ဝေ။ သုတေသနနှင့်သတင်း»ဒီနှင့်အခြားအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောသုတေသနနှင့်မီဒီယာရေးသားခြင်းဆိုင်ရာနောက်ဆုံးသတင်းများအတွက်။ ဤနေရာတွင်အသင်း ၀ င်များသည်သူတို့၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အကြံဥာဏ်များဖလှယ်ခြင်းဖြင့်တစ်နေ့တာအချိန်မရွေးအကူအညီနှင့်အထောက်အပံ့များရနိုင်သည်။
စိတ်ဖိစီးမှုသည် fibromyalgia တွင်“ flare ups” ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
နေ့စဉ်ဘ၀တွင် စိတ်ဖိစီးမှုကို လျှော့ချခြင်းသည် ဘဝအရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးပြီး ရောဂါလက္ခဏာများကို သက်သာစေနိုင်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန် အကြံပြုထားသော နည်းလမ်းအချို့မှာ ယောဂ၊ သတိပဋ္ဌာန်၊ နှိပ်နယ်ခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့် တရားထိုင်ခြင်း တို့ဖြစ်သည်။ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်များနှင့်ထိုကဲ့သို့သောနည်းစနစ်များကိုကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုခြင်းသည်လည်းကူညီနိုင်သည်။
- အနားယူဖို့ အချိန်ပေးပါ။
မြင့်မားသောစံနှုန်းများကို သတ်မှတ်သည့် ယနေ့ခေတ်တွင် သင်ကိုယ်တိုင် လွယ်ကူစွာ သင်ယူပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နေ့စဥ်အနားယူချိန်ကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အကြံပြုပါသည်။ acupressure ဖျာ (ပိုမိုဖတ်ရှုရန် ဤနေရာကို နှိပ်ပါ - လင့်ခ်သည် ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုတွင် ဖွင့်လှစ်သည်)။ ဤဗားရှင်းတွင် လည်ပင်းအပေါ်ပိုင်းနှင့် လည်ပင်းရှိ တင်းမာသောကြွက်သားများအဖြစ် လုပ်ဆောင်ရန် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည့် လည်ပင်းခေါင်းအုံးတစ်ခုလည်း ပါရှိသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: Fibromyalgia ပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်း7လူသိများအစပျိုး
ဆောင်းပါးဖတ်ရှုဖို့အပေါ်က link ကိုနှိပ်ပါ။
သို့သော်၊ အချို့သောလေ့ကျင့်ခန်းပုံစံများသည် ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်- ဥပမာ- ပုံမှန်၊ ပြင်းထန်မှုနည်းသောလေ့ကျင့်ခန်း၊ လမ်းလျှောက်ခြင်း သို့မဟုတ် ရေနွေးကန်ထဲတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းတို့သည် fibromyalgia အတွက် အကောင်းဆုံးကုသမှုများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်သင့်အားနာကျင်မှုနှင့်တောင့်တင်းမှုကိုလျော့နည်းစေပြီးနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းကိုပိုမိုမြင့်မားစေသည်။ သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး လေ့ကျင့်ခန်းအမျိုးအစားကို ရှာဖွေရန် သင့်ဆရာဝန်၊ သင်၏ ရူပဗေဒပညာရှင်၊ သင်၏ chiropractor သို့မဟုတ် ဆေးခန်းနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပါ - သင့်အား ကျွန်ုပ်တို့၏ Youtube ချန်နယ် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ သင်ကြားရေးဆိုင်ရာ ဆေးခန်းတစ်ခုမှ တစ်ဆင့် ကူညီပေးလိုလျှင်လည်း ကျွန်ုပ်တို့မှ ဝမ်းမြောက်စွာ ကူညီပေးပါသည်။
Fibromyalgia သည်ကိုယ်ခန္ဓာ၏ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များတွင်နာတာရှည်နာကျင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ သင်၏ကျောကိုတင်ရန်၊ တင်ပါးနှင့်တင်ပါးဆုံတွင်းရွေ့လျားမှုကိုအထောက်အကူပြုနိုင်သောလေ့ကျင့်ခန်းငါးခုပါ ၀ င်သည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုကြည့်ရန်အောက်တွင်နှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုနှင့်ပူးပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုရယူပါ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြိုဆိုပါတယ်!
ဗွီဒီယို - Rewumatists အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း ၇ ။
ဗီဒီယိုကိုသင်နှိပ်သောအခါစတင်သည်မဟုတ်လော သင့်ရဲ့ browser ကို update လုပ်ပါသို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ။ သင်ပိုမိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်လိုပါကရုပ်သံလိုင်းသို့လုံးဝအခမဲ့ရယူရန်သတိရပါ။
ပူနွေးသောရေချိုးခြင်းတွင်အိပ်ခြင်းသည်ကြွက်သားများကိုဖြေလျော့စေပြီးနာကျင်မှုကခေါင်မိုးကိုအနည်းငယ်လျှော့ပေးနိုင်သည်။ ဤအပူအမျိုးအစားသည် ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိ endorphin အဆင့်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပြီး နာကျင်မှုအချက်ပြမှုများကို ပိတ်ဆို့ကာ ပိုမိုကောင်းမွန်သော အိပ်စက်ခြင်းအရည်အသွေးကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ငါတို့သည်အခြားနည်း၏အသုံးပြုမှုကိုအကြံပြုပါသည်။ ပြန်သုံးနိုင်သော အပူထုပ် (ဥပမာ ဤနေရာတွင် ကြည့်ပါ - လင့်ခ်သည် ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုတွင် ဖွင့်သည်)။ အထုပ်ကို အပူပေးပြီးနောက် တင်းမာပြီး နာကျင်သော ကြွက်သားများပေါ်တွင် တင်ထားခြင်းဖြင့် အလုပ်လုပ်သည်။
ကော်ဖီပြင်းပြင်းတစ်ခွက်ကို ကြိုက်လား။ ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲ fibro နဲ့ကျွန်ုပ်တို့အတွက် အကျင့်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
ကဖိန်းဓာတ်သည်အဓိကလှုံ့ဆော်သူဖြစ်သည်- ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်နှလုံးနှင့်ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အား 'မြင့်မားသောသတိပေးမှု' တွင်ရှိရန်လှုံ့ဆော်သည်ဟုဆိုလိုသည်။ သုတေသနပြုချက်များအရ fibromyalgia တွင် ကျွန်ုပ်တို့တွင် လွန်ကဲသောအာရုံကြောအမျှင်များရှိသည်ကို တွေ့ရှိသောအခါ၊ ဤအရာသည် သေချာပေါက်အကောင်းဆုံးမဟုတ်ကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့သဘောပေါက်ပါသည်။ ဒါပေမယ့် ငါတို့ မင်းရဲ့ကော်ဖီကို မင်းဆီကနေ လုံးဝ မယူသွားဘူး - အဲဒါက မယုံနိုင်လောက်အောင် ဆိုးရွားသွားလိမ့်မယ်။ ရာထူးက နည်းနည်းလျှော့ဖို့ ကြိုးစားတယ်။
ယင်းကအိပ်စက်ခြင်းနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းတို့ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေသည်။ ထို့ကြောင့် fibromyalgia ရှိသူများသည်အလွန်တက်ကြွသော ဦး နှောက်အာရုံကြောစနစ်ရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကဖိန်းဓာတ်သုံးစွဲခြင်းကိုကန့်သတ်ပါ။ အထူးသဖြင့်အရေးကြီးသည်မှာသင်သည်နေ့လည်မှ စ၍ ကော်ဖီနှင့်စွမ်းအင်သောက်သုံးခြင်းကိုရှောင်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ decaffeinated option ကိုသင်စမ်းသုံးကြည့်နိူင်လား။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ဤရွေ့ကား7Fibromyalgia နာကျင်မှုအမျိုးအစားများဖြစ်ကြသည်
မင်းအတွက်အချိန်ဖယ်ထားပါ - နေ့တိုင်းနေ့တိုင်း
အချိန်မှန် fibromyalgia နှင့်ငါတို့အဘို့အပိုအရေးကြီးတယ်နိုင်ပါတယ်။
Fibromyalgia သည် သင့်ထံ ကျရောက်နေသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ဘဝကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သင့်ကိုယ်သင် ဂရုစိုက်မှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် သင့်တစ်နေ့တာအတွက် အချိန်ကို သေချာဖယ်ထားပါ။ သင်၏ဝါသနာကိုခံစားပါ၊ တေးဂီတကိုနားထောင်ပါ၊ အနားယူပါ။
ထိုသို့သောမိမိကိုယ်မိမိအချိန်သည်ဘဝကိုမျှမျှတတဖြစ်စေပြီးသင်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ကိုလျှော့ချပြီးသင်၏နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်စွမ်းအင်ပိုမိုပေးနိုင်သည်။ လစဉ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး (ဥပမာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကုထုံး၊ ခေတ်သစ် chiropractic သို့မဟုတ်) ဖြစ်နိုင်သည် ဆေးထိုးခြင်း?) လည်းအကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်နိုင်သလဲ
fibromyalgia ရှိသူများစွာသည် သွား၍ နာကျင်မှုကို သူတို့ကိုယ်သူတို့ ထိန်းသိမ်းသည်။ - ဒါကြောင့်မရှိတော့တတ်နှင့်စိတ်ခံစားမှုကျော်ယူသည်အထိ။ Fibromyalgia သည်သင်ကိုယ်တိုင်သာမကသင်၏ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိစိတ်ဖိစီးမှုများကိုဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ဆက်သွယ်မှုသည်သော့ချက်ဖြစ်သည်။
အဆင်မပြေရင် ပြောပါ။ အားလပ်ချိန်၊ ရေနွေးပူနဲ့ ရေချိုးတာ ဒါမှမဟုတ် အလားတူအချိန်မျိုးရှိရမယ်၊ အခုက fibromyalgia က အထွတ်အထိပ်ရောက်နေပြီလို့ ပြောပါ။ မိသားစုနှင့်သူငယ်ချင်းများကသင်၏နာမကျန်းဖြစ်မှုနှင့်၎င်းအားပိုမိုဆိုးရွားစေသည့်အရာများကိုသိရန်လိုအပ်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောဗဟုသုတဖြင့်သင်၏အကူအညီလိုအပ်ပါကဖြေရှင်းချက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
၇။ NO ဟုပြောရန်သင်ယူပါ
Fibromyalgia ကိုမကြာခဏ 'မမြင်ရသောရောဂါ' ဟုခေါ်သည်။
နာကျင်ကိုက်ခဲနေတာ ဒါမှမဟုတ် တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ် ခံစားနေရတာကို မြင်ဖို့ ခက်နိုင်လို့ အဲဒါကို ခေါ်တာ။ ဤနေရာတွင် သင်ကိုယ်တိုင် နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်ရန်နှင့် သင်သည်းခံနိုင်သည့်အရာကို သင်သင်ယူရန် အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ သင်၏အလုပ်များနှင့်နေ့စဉ်ဘဝများ၌လူများသည်သင့်ကိုများစွာသောအစိတ်အပိုင်းများကိုလိုချင်သည့်အချိန်တွင်သင်၏အသုံးဝင်သောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်သင်၏အဓိကတန်ဖိုးများနှင့်ဆန့်ကျင်နေလျှင်သင် NO ကိုပြောရန်သင်ယူရမည်။
ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အဖွဲ့သို့ ၀ င်ပါရန်ဤရောဂါရှိသူအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့တိုက်တွန်းပါသည် «ဒူလာ - နော်ဝေ။ သုတေသနနှင့်သတင်း» - ဤတွင်သင်သည်သင်၏အခြေအနေအကြောင်းပြောဆိုနိုင်ပြီးစိတ်တူသူများထံမှကောင်းသောအကြံဥာဏ်များရယူနိုင်သည်။
ထပ်ပြီးတော့ လိုချင်တယ်။ å ဒီဆောင်းပါးကိုလူမှုရေးမီဒီယာဒါမှမဟုတ်သင့်ဘလော့ဂ်ကနေတစ်ဆင့်မျှဝေဖို့ကောင်းကောင်းတောင်းပါ (ဆောင်းပါးနှင့်တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန်အခမဲ့ခံစားရ) ။ နာတာရှည်နာကျင်မှုခံစားရသူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ဦး တည်သည့်ပထမ ဦး ဆုံးခြေလှမ်းကိုနားလည်ခြင်းနှင့်အာရုံစူးစိုက်ခြင်း။
ရွေးချယ်မှုက - FB တွင်တိုက်ရိုက်မျှဝေပါ - ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကိုမိတ္တူကူးပြီးသင်၏ facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် (သို့) သင်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်သည့်သက်ဆိုင်ရာ facebook အုပ်စုတွင်ထည့်ပါ။ (သို့) သင်၏ facebook တွင်နောက်ထပ်ပို့စ်ကိုမျှဝေရန်အောက်ပါ "SHARE" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
နောက်ထပ်မျှဝေဖို့ဒီကိုနှိပ်ပါ အကြီးအကျယ်နာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါနှင့် fibromyalgia ကိုပိုမိုနားလည်သဘောပေါက်လာစေရန်ကူညီပေးသူတိုင်းကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်။
မေးခွန်းများ? သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ တွဲဖက်ဆေးခန်းတစ်ခုတွင် ရက်ချိန်းယူလိုပါသလား။
ကျွန်ုပ်တို့သည် နာတာရှည်နာကျင်မှုကို ခေတ်မီအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် လေ့ကျင့်ပေးခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
တဦးတည်းမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ရန်အခမဲ့ခံစားရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ အထူးပြုဆေးခန်းများ (ဆေးခန်းအကျဉ်းချုပ်ကို ဝင်းဒိုးအသစ်တစ်ခုတွင် ဖွင့်ထားသည်) သို့မဟုတ် ဖွင့်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ မေးခွန်းများရှိပါက (Vondtklinikkene - ကျန်းမာရေးနှင့် လေ့ကျင့်ခန်း)။ ချိန်းဆိုမှုများအတွက်၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် သင့်အတွက် အသင့်တော်ဆုံး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမည့်အချိန်ကို ရှာဖွေနိုင်စေရန် ဆေးခန်းအမျိုးမျိုးတွင် ၂၄ နာရီ အွန်လိုင်း ဘွတ်ကင်လုပ်ထားသည်။ ဆေးခန်းဖွင့်ချိန်အတွင်းလည်း ကျွန်ုပ်တို့ထံ ဖုန်းဆက်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့တွင် အော်စလိုတွင် သင်ကြားရေးဌာနများရှိသည်။ Lambertseter) နှင့် Viken (Råholt og Eidsvoll) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျွမ်းကျင်သော ကုထုံးပညာရှင်များသည် သင့်ထံမှ ကြားနာရန် မျှော်လင့်ပါသည်။
နောက်စာမျက်နှာ \_ t5Fibromyalgia နှင့်အတူလှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်ခန်း
အပေါ်ပုံသို့မဟုတ် link ကိုနှိပ်ပါ။
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/7-TIPS-FOR-Å-HOLDE-UT-MED-FIBROMYALGI.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2017-06-13 20:07:332022-03-22 16:15:26၇ Fibromyalgia နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အချက်များ
၆ Fibromyalgia နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း
12 / 09 / 2017 /0 မှတ်ချက်/i Fibromyalgia, နာတာရှည်နာကျင်မှု, လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်း/av ရေတံခွန်
ဒီအခြေအနေက ပုံမှန်လေ့ကျင့်ရေးမှာ မယုံနိုင်လောက်အောင်ကို ခက်ခဲပြီး မဖြစ်နိုင်လောက်ပါဘူး - ထို့ကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော လေ့ကျင့်ခန်း ၆ ခုပါ၀င်သော လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်ကို စုစည်းထားပါသည်။ fibromyalgia. ဤအရာက သင့်ကို သက်သာရာရစေပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘ၀ကို ပေးစွမ်းနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့လည်း အကြံပြုပါသည်။ ရေပူရေကူးကန်အတွက်လေ့ကျင့်ရေး ဒီလိုလုပ်ခွင့်ရရင်
Bonus: fibromyalgia ဝေဒနာရှင်များအတွက် အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော လေ့ကျင့်ခန်းများပါရှိသော လေ့ကျင့်ခန်းဗီဒီယိုကို ကြည့်ရှုရန်နှင့် အပန်းဖြေနည်းများအကြောင်း ပိုမိုဖတ်ရှုရန် အောက်သို့ဆင်းပါ။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: ၇ Fibromyalgia နှင့်ခံနိုင်ရည်ရှိရန်အချက်များ
ဗွီဒီယို - Fibromyalgia ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အထူးခွန်အားလေ့ကျင့်ခန်း
ဤတွင်သင်တီထွင်ထားသော fibromyalgia ရှိသူများအတွက်စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်ကိုတွေ့သည် chiropractor အလက်ဇန်းဒါး Andorff - သူသည်ရူပကုထုံးပညာရှင်တစ် ဦး နှင့်သူ၏ဒေသခံအဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းသည်။ လေ့ကျင့်ခန်းများကိုကြည့်ရှုရန်အောက်ပါဗီဒီယိုကိုနှိပ်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့မိသားစုနှင့်ပူးပေါင်းပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ယူကျု့ချန်နယ်ကိုရယူပါ လေ့ကျင့်ခန်းအစီအစဉ်များနှင့်ကျန်းမာရေးဗဟုသုတများအတွက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ကြိုဆိုပါတယ်
ဗွီဒီယို - တင်းကျပ်သောကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ခြင်း
Fibromyalgia တွင်ကြွက်သားနာကျင်မှုနှင့်ကြွက်သားတင်းမာမှုတိုးများလာသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောလေ့ကျင့်ခန်းငါးခုသည်ကြွက်သားတင်းတင်းကျပ်ကျပ်အားဖြည့်ရန်သင့်အားကူညီပေးနိုင်သည်။
ဗီဒီယိုများကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။ ၎င်းတို့ကို သင်နှစ်သက်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်ကို စာရင်းသွင်းပြီး ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် လက်မထောင်ပေးခြင်းဖြင့် သင့်ကို အမှန်တကယ် ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ကိုအများကြီးဆိုလိုတယ် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်!
နာတာရှည်နာကျင်မှုဝေဒနာခံစားနေရသူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကူညီပံ့ပိုးပေးပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ကိုသင်ကူညီလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည် Facebook က နှင့်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုချန်နယ်စာရင်းသွင်းပါ YouTube ကို. ထောက်ခံမှုအဖွဲ့အကြောင်းလည်းပြောချင်ပါတယ် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု - နော်ဝေ - သုတေသနနှင့်သတင်း - သင်သတင်းအချက်အလက်နှင့်အဖြေများကိုသိနိုင်သောနာတာရှည်နာကျင်မှုရှိသူများအတွက်အခမဲ့ Facebook အဖွဲ့ဖြစ်သည်။
များစွာသော သက်ရောက်မှုရှိသော အခြေအနေတစ်ခုအတွက် ရည်ရွယ်၍ သုတေသနကို ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်သည် - ထို့ကြောင့် ဤဆောင်းပါးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် မျှဝေရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာမှတဆင့် "fibromyalgia ကိုပိုမိုသုတေသနလုပ်ဖို့လိုတယ်" ဤနည်းအားဖြင့်လူသည် 'မမြင်ရသောရောဂါ' ကို ပို၍ မြင်နိုင်စေသည်။
"flare-ups" နှင့်ယိုယွင်းပျက်စီးမှုကိုရှောင်ရှားရန်၎င်း၏ကန့်သတ်ချက်များကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်မမှန်မကန်လုပ်ဆောင်လျှင်ခန္ဓာကိုယ်အားမညီမျှခြင်းကိုဖြစ်စေပြီးနာကျင်မှုကိုပိုဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့် "skipper's grip" ကိုယူခြင်းထက်ပုံမှန်အနိမ့်ဆုံးလေ့ကျင့်ခန်းကိုကြိုးစားခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
ဒါ့အပြင်ဖတ်ပါ: Fibromyalgia ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်ကိုသိ7အစပျိုး
1. အပန်းဖြေခြင်း- အသက်ရှုနည်းများ နှင့် Acupressure
5 technique ကို
ပထမဆုံး အခြေခံ နက်နဲတဲ့ အသက်ရှုနည်းလို့ ယူဆရတဲ့ အဓိက နိယာမကတော့ တစ်မိနစ်မှာ ၅ ကြိမ် ရှူသွင်း၊. ၎င်းကိုရရှိရန်နည်းလမ်းမှာနက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်မိခြင်းနှင့် ၅ အထိရေတွက်ခြင်းဖြစ်သည်။
နောက်ထပ်လူသိများတဲ့ အသက်ရှုနည်းကတော့ ခံနိုင်ရည်ရှိတဲ့ အသက်ရှုခြင်းပါ။ ဒါက ခန္ဓာကိုယ်ကို ပြေလျော့စေပြီး ပိုပြီး သက်တောင့်သက်သာဖြစ်စေမယ့် အနေအထားမျိုး ဖြစ်စေသင့်ပါတယ်။ အသက်ရှူနည်းစနစ်ကိုနက်ရှိုင်းစွာရှူရှိုက်မိခြင်းအားဖြင့်နှုတ်ခမ်းများများအကွာအဝေးမကျသွားစေရန်နှင့်လေထုကိုခုခံနိုင်မှုမှဆန့်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။
'ခုခံနိုင်စွမ်းရှူခြင်း' ကိုလုပ်ဆောင်ရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းမှာပါးစပ်မှ ထွက်၍ နှာခေါင်းထဲမှထွက်ရန်ဖြစ်သည်။
Acupressure Mat ဖြင့် အနားယူခြင်း။
ခန္ဓာကိုယ်ရှိ ကြွက်သားများ တင်းမာမှုကို ပြေလျော့စေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သော အတိုင်းအတာကို နေ့စဉ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ acupressure ဖျာ (ဒီနေရာမှာဥပမာကိုကြည့်ပါ - link အသစ် window ထဲမှာဖွင့်လှစ်) ။ ခန္ဓာကိုယ်သည် နှိပ်နယ်သည့်နေရာများကို ပိုခံနိုင်ရည်ရှိလာသောကြောင့် 15 မိနစ်ခန့် sessions များဖြင့် စတင်ပြီး ကြာမြင့်သော session များအထိ လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ နှိပ်ပါ။ ဒီမှာ Relaxation mat အကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုရန်။ ကျွန်ုပ်တို့ချိတ်ဆက်ထားသော ဤဗားရှင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် ပိုကောင်းသည့်အချက်မှာ ၎င်းသည် လည်ပင်းရှိ တင်းကျပ်သောကြွက်သားများဆီသို့ လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်စေသည့် လည်ပင်းအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါရှိသည်။
အဆစ်များ တောင့်တင်းခြင်းနှင့် ကြွက်သားများ နာကျင်ခြင်းတို့သည် fibromyalgia ကြောင့်ဖြစ်သောသူများအတွက် နေ့စဉ်ဘဝ၏ ငြီးငွေ့ဖွယ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တစ်နေ့တာလုံး ပေါ့ပါးသော လှုပ်ရှားမှုဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်ကို ပုံမှန်ဆန့်တန်းနေရန် အရေးကြီးပါသည်။ - ပုံမှန်ဆန့်ခြင်းကအဆစ်များကိုလွယ်ကူစွာရွေ့လျားစေပြီးသွေးကိုကြွက်သားများသို့စီးဆင်းစေသည်။
အထူးသဖြင့်ကြမ်းတမ်းသောခြေထောက်ကြွက်သားများ၊ ခြေထောက်ကြွက်သားများ၊ ထိုင်ခုံကြွက်သားများ၊ အဘယ်ကြောင့်ပိုကြီးတဲ့ကြွက်သားအုပ်စုများရည်ရွယ်အလင်းဆန့် session တစ်ခုနှင့်အတူနေ့ကိုစတင်ရန်ကြိုးစားသည်မဟုတ်လော
စတင်ခြင်းရာထူး: လေ့ကျင့်ရေးဖျာတစ်ခုတွင်လေးခုလုံးကိုရပ်ပါ။ သင်၏လည်ပင်းနှင့်နောက်ကျောကိုကြားနေအနည်းငယ်တိုးချဲ့ထားသည့်နေရာတွင်ထားရန်ကြိုးစားပါ။
ဆန့်ထုတ်ခြင်း- ထို့နောက် သင့်ခြေဖနောင့်များဆီသို့ သင့်တင်ပါးများကို လျှော့ပါ။ - အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့ရွေ့လျားမှု။ ကျောရိုးထဲမှာကြားနေကွေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့သတိရပါ။ စက္ကန့် 30 လောက်အဘို့အလမ်းပိုင်းကိုင်ထားပါ။ သင်အဆင်ပြေသလောက်ဝေးလံသောအဝတ်အစားများသာ။
မကြာခဏ လေ့ကျင့်ခန်း ၄-၅ ကြိမ် ထပ်လုပ်ပါ။ လိုအပ်ပါက လေ့ကျင့်ခန်းကို တစ်နေ့ ၃-၄ ကြိမ် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
fibromyalgia၊ rheumatism နှင့် နာတာရှည် နာကျင်ကိုက်ခဲမှု ရှိသူအများစုသည် ရေနွေးတွင် လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းက ပို၍ နူးညံ့နိုင်သည် - နှင့် အကြောအဆစ်များနှင့် နာကျင်သော ကြွက်သားများကို ပိုဂရုစိုက်ကြောင်း သိထားကြသည်။
ရေပူရေကန်လေ့ကျင့်မှုသည်ရေရှည်ကြွက်သားများနှင့်ပူးတွဲရောဂါများကိုကာကွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်အဓိကသော့ချက်ဖြစ်သင့်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့အမြင်ရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်အမှန်တရားမှာစည်ပင်သာယာရေးပြတ်လပ်မှုကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောကမ်းလှမ်းမှုများကိုအမြဲတမ်းပိတ်ထားရသည်။ ဒီလမ်းကြောင်းကိုပြောင်းပြန်ပြောင်းနိုင်ပြီးဒီလေ့ကျင့်ရေးနည်းလမ်းကိုထပ်မံအာရုံစိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
၅။ နူးညံ့သိမ်မွေ့သောအဝတ်အထည်များနှင့်လှုပ်ရှားမှုသင်တန်း (ဗွီဒီယိုနှင့်အတူ)
ဤတွင် fibromyalgia ရှိသူများအတွက်၊ အခြားနာတာရှည်နာကျင်မှုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့် အဆစ်အမြစ်နာရောဂါရှိသူများအတွက် စိတ်ကြိုက်လေ့ကျင့်ခန်းများ ရွေးချယ်ထားပါသည်။ ၎င်းတို့ကို သင်အသုံးဝင်သည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။ - နှင့်သင်နှင့်လည်းအလားတူရောဂါလက္ခဏာရှိသည့်အသိအကျွမ်းများနှင့်သူငယ်ချင်းများကို၎င်းတို့ (သို့မဟုတ်ဆောင်းပါး) ကိုမျှဝေရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
ဗွီဒီယို - Rewumatists အတွက်လေ့ကျင့်ခန်း ၇
ဗီဒီယိုကိုသင်နှိပ်သောအခါစတင်သည်မဟုတ်လော သင့်ရဲ့ browser ကို update လုပ်ပါသို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ YouTube ချန်နယ်တွင်တိုက်ရိုက်ကြည့်ပါ။ သင်ပိုမိုလေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်များနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်လိုပါကရုပ်သံလိုင်းသို့စာရင်းသွင်းရန်သတိရပါ။
fibromyalgia နှင့်အတူများစွာသောလည်းရံဖန်ရံခါနှောင့်အယှက်နေကြသည် sciatica နာကျင်မှု နှင့်ခြေထောက်မှဓါတ်ရောင်ခြည်။ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းကိုလွယ်ကူစွာစည်းရုံးခြင်းဖြင့်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်းသည်ရွေ့လျားနေသောကြွက်သားမျှင်များနှင့်ကြွက်သားတင်းမာမှုကိုလျော့နည်းစေသည် - အလှည့်အတွက်လျော့နည်း sciatica ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ ၃ စုံမှ ၃၀-၆၀ စက္ကန့်ကိုဆန့်ရန်အကြံပြုပါသည်။
ဗီဒီယို - Piriformis Syndrome အတွက်အဝတ်အစားလေ့ကျင့်ခန်း ၄
ယောဂသည် fibromyalgia ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုသက်သာစေနိုင်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင် နာကျင်မှုသည် ပြင်းထန်နိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်မှုပြန်ရရန် နူးညံ့သိမ်မွေ့သော ယောဂလေ့ကျင့်ခန်းများ၊ အသက်ရှုနည်းစနစ်များနှင့် တရားထိုင်ခြင်းတို့ကို အသုံးပြုရန် အသုံးဝင်ပါသည်။ အများအပြားသည်လည်း ယောဂနှင့် ပေါင်းစပ်ထားသည်။ acupressure ဖျာ.
ယောဂကျင့်စဉ်ကိုတွေးတောဆင်ခြင်ခြင်းဖြင့်ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့်၊ သင်သည်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုကောင်းမွန်သောချုပ်တည်းမှုကိုအောင်မြင်နိုင်ပြီးအဆိုးဆုံးအချိန်တွင်နာကျင်မှုမှသင့်ကိုဝေးကွာသွားစေနိုင်သည်။ ယောဂအဖွဲ့သည်လူမှုရေးနှင့်လည်းသက်ဆိုင်ပြီး၎င်းသည်ကွဲပြားခြားနားသောကုထုံးများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်အတူအကြံဥာဏ်နှင့်အတွေ့အကြုံများဖလှယ်ခြင်းအတွက်နယ်ပယ်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
- Hip Pain အတွက်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း ၅
- Back Pain အတွက်ယောဂလေ့ကျင့်ခန်း
compression ဆူညံသံ ကြွက်သားများကိုသွေးလည်ပတ်မှုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ချုံ့ခြေအိတ်ကဲ့သို့သော (သို့မဟုတ်) အထူးအဆင်ပြေအောင်ချုံ့လက်အိတ် လက်၌အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းလက္ခဏာတွေကိုဆန့်ကျင်)
Arnica မုန့် သို့မဟုတ် အပူအေးစက် (အသုံးပြုမှု တိုးတက်မှု အစီရင်ခံစာ အများအပြား)
အနှစ်ချုပ်- Fibromyalgia ရှိသူများအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့် အပန်းဖြေနည်းများ
Fibromyalgia သည်နေ့စဉ်ဘ ၀ တွင်မယုံနိုင်လောက်အောင်များပြားလှသောစိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့်ကြွက်သားများနှင့်အဆစ်များ၌နာကျင်မှုပိုမိုများပြားသောသူများအတွက်သင့်လျော်သောနူးညံ့သိမ်မွေ့သောလေ့ကျင့်ခန်းများကိုသိရန်အရေးကြီးသည်။ လူတိုင်းကိုဖေ့စ်ဘွတ်ခ်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့သို့အခမဲ့ပါဝင်ရန်အကြံပြုသည် အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းခြင်းနှင့်နာတာရှည်နာကျင်မှု - နော်ဝေ - သုတေသနနှင့်သတင်း စိတ်သဘောထားတူသူများနှင့်စကားပြောဆိုနိုင်သည့်နေရာ၊ ဤအကြောင်းအရာနှင့်ပါတ်သက်သည့်နောက်ဆုံးသတင်းများကိုရယူပြီးအတွေ့အကြုံများဖလှယ်ပါ။
တစ်ဖန်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဤဆောင်းပါးကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင် သို့မဟုတ် သင့်ဘလော့ဂ်မှတစ်ဆင့် မျှဝေရန် သင့်အား တောင်းဆိုလိုပါသည် (ဆောင်းပါးနှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန် အားမနာပါ)။ နားလည်မှုနှင့် အာရုံစူးစိုက်မှု တိုးလာခြင်းသည် fibromyalgia ဝေဒနာရှင်များအတွက် ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေ့စဉ်ဘဝဆီသို့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်သည်။
ရွေးချယ်မှုက - FB တွင်တိုက်ရိုက်ဝေမျှပါ - ဝက်ဘ်ဆိုက်လိပ်စာကိုကော်ပီကူးပြီးသင်၏ facebook စာမျက်နှာသို့သင်သင် ၀ င်ရောက်သက်ဆိုင်ရာ facebook အုပ်စုတွင်ထည့်ပါ။ (သို့) သင်၏ facebook တွင်နောက်ထပ်ပို့စ်ကိုမျှဝေရန်အောက်ပါ "SHARE" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ။
ရွေးချယ်စရာဂ - လိုက်နာပါ ကျွန်ုပ်တို့၏ Facebook စာမျက်နှာ (ဆန္ဒရှိလျှင်ဤနေရာတွင်နှိပ်ပါ)
ကျွန်ုပ်တို့သည် နာတာရှည်နာကျင်မှုအတွက် ခေတ်မီအကဲဖြတ်ခြင်း၊ ကုသခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
နောက်စာမျက်နှာ \_ t - သုတေသန: ဤသည်အကောင်းဆုံး Fibromyalgia အစားအစာဖြစ်ပါတယ်
- Vondt.net တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာပါ YOUTUBE
- Vondt.net တွင်ဝင်ရောက်လေ့လာပါ FaceBook
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/6-øvelser-mot-fibromyalgi.jpg?media=1648573622 368 700 ရေတံခွန် https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 ရေတံခွန်2017-09-12 15:45:552022-03-22 15:39:07၆ Fibromyalgia နှင့်အတူလေ့ကျင့်ခန်း
1 ၏စာမျက်နှာ 11123>»